Atari inogadzira mufaro kune Gnu / Linux | Linux Vakapindwa muropa
Mavhiki mashoma apfuura, imwe yemakambani ekare emitambo yemavhidhiyo pasi rose, Atari, akaita yepamutemo mutambo wayo mutsva wemutambo uye kuvhurwa kwayo kuri kuuya, pamwe nehunhu hwayo uye software yaizotakura.
Chinhu chinonyanya kushamisa pane zvese izvi kwaisangova kuvhurwa kwekombiki nyowani yemutambo asi chokwadi chekusanganisira nekushandisa Gnu / Linux senzira huru yekushandisa yeconsole.
Izvi zvaishamisa nekuti kazhinji hapana koni yemutambo kazhinji ine kugoverwa kweLinux kana yeanoshanda inoshanda sisitimu asi yega yekushandisa system. Asi Atari anobata zvimwe zvinoshamisa.
Munguva pfupi yapfuura, Atari yaunza mufaro unozobatsira mutambo weconsoon. Iyi joystick ine retro mweya, sezvo yakatarisana nenyika yepasirose mitambo yemavhidhiyo uye iyo yainogadziridzwa. Asi handicho chega chinhu icho chinoenderana nacho. Uyu mufaro unonakidza nekuti zvakare inowirirana nekuparadzirwa kweGnu / Linux. Uye ichiri chishongedzo, saka iyo chokwadi chekuti yakagadzirirwa iyo Linux inova inonyanya kukosha kana zvichibvira.
Mufaro waAtari unotarisa nyika yemitambo yechinyakare
Parizvino, nekuda kweMitambo yeGnome uye emulators, chero mushandisi weGnu / Linux anogona kudzokorora zvekare zvekare pakombuta yavo, asi ichokwadi kuti vazhinji veava vashandisi havaregi kushandisa iyo keyboard senge chete kutonga kwemutambo wevhidhiyo. Uyu mufaro unogadzirirwa kuve imwezve nzira, asi imwe nzira inodzosera makore egoridhe emitambo yemavhidhiyo.
Iyo Atari joystick ichatanga kutumira ne iyo AtariBox koni uye gare gare ichagoverwa zvakasununguka, kwatinogona kushandisa AtariBox koni kana kungori komputa yedu neGnu / Linux.
Handizive kana 2017 richava gore reLinux paDesktop, asi zvirokwazvo igore remutambo wevhidhiyo weLinux. Iko kune kwakawanda uye kwakawanda kudzokorora uko kunoshandisa Gnu / Linux uye multiplatform mitambo yemavhidhiyo iyo inofunga nezve penguin chikuva uye zvinoreva kuti vashandisi veGnu / Linux havafanirwe kusiya chikuva kuti vaende kunotamba.
Iyi "boom" haina kumira uye kunyangwe 2017 izere nemasampula akati wandei uye kubudirira kwemitambo yemavhidhiyo yeGnu / Linux, muna 2018 tichava nemamwe mimwe mienzaniso yacho uye pamwe inopera gore rese Unofungei?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Atari inogadzira joystick yeGnu / Linux
Ndinovimba uri pamutengo usiri kudhura kwazvo kukurudzira kuti ndiutenge